Izizathu zokuthi kungani sithanda ukuthenga umatilasi wasentwasahlobo | Rayson
Izizathu zokuthi kungani sithanda ukuthenga umatilasi wasentwasahlobo
Lokhu kuzoqala uhlelo lokuvuselelwa kwesikhwama ukuze uthole ukuthenga kwethu masonto onke. Ngezindaba ezinkulu ezishaqisayo muva nje, 1. 12 trillion - amathani amathani e-icebergs ahlukaniswe ne-larsen c ice rack e-Antarctica, ngicabanga ukuthi sonke kufanele sikwazi ukunakekela ukuguquka kwesimo sezulu. Manje yisikhathi sokuthi sithathe umthwalo wemfanelo ngezinqumo zethu, futhi kufanele sithathe izenzo ezincane esingazithatha ukuze siphile ngokuzibophezela kuleli lizwe.
\_ "Yabekwa ngaphansi kwakhe (i-Ryan \_ s) iwashi.. \_ "IT \_ 's Indaba Ethandekayo Ethambisayo I-Ontario Labour Federation isebenzisa amakhamera we-spy. URyan uthe i-invoice ihlolwe ukuthi inguhlelo olusha lokuqapha alusho alunakwenza lutho ngekhamera esibonakaliso sokuphuma.